Gstaad मा परम निद्रा अनुभव
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » समाचार » Gstaad मा परम निद्रा अनुभव
डिसेम्बर 16, 2013
Gstaad, पौराणिक स्विस स्की रिसोर्टमा रात बिताउन धेरै तरिकाहरू छन्। यस वर्ष, अधिकतर होटलहरू डिसेम्बर १,, २०१ around को आसपास जाडो मौसमको लागि खुल्नेछ।
गत डिसेम्बरमा खोलिएको Alpina Gstaad, १० वर्षमा Gstaad मा पहिलो नव निर्मित, पाँच-सितारा होटेल हो। यो एक विशेष पहाडी टेकमा अवस्थित छ, र सम्पत्ती विकासको SFR100 मिलियनको लगानी भोल्युम छ र यसमा hotel 300 कोठा, १ private निजी अपार्टमेन्ट, २ निजी चलेटहरू, र पहाडमा बनाइएको एउटा ग्यारेज सहितको होटल समावेश छ।
अधिक प्रामाणिक र असाधारण घर-देखि-घर अनुभवको लागि खोज्नेहरूले डोनाटेला बर्टरेल्ली (अमेरिकी कप विजेता अर्नेस्टो बर्टरेल्लीकी बहिनी) को स्वामित्वमा थोरै लुकाइएको तर सुन्दर चम्किलो फाइभ-स्टार ग्रान्ड होटेल पार्कको मजा लिनेछन्।
यो सम्पत्ती धनी स्विस परिवारहरूका लागि लुक्ने ठाउँ हो जुन यहाँ क्रिसमस खर्च गर्न मन पराउँछन् र चरम मौसमको समयमा कोठाको लागि १,1,600०० स्विस फ्र्यान्क (१$०० अमेरिकी डलर) तिर्न सक्छन्। धेरैजसो स्टाफ इटालियन हो र कारहरू तुरुन्तै ग्यारेजमा टाँसिएका छन् एक पाइला पछि चाँडै।
तर एकले यस ग्रैंड होटेल पार्कमा परम्परागत र विलासी रूढीवादी क्रिसमस मनाउन सक्छ जुन विशेष गरी यस अवसरको लागि redecorated छ, यस वर्ष एक व्यक्ति डबल कोठामा सीएचएफ6from 585 बाट includes रातहरू सम्मिलित छ, जसमा विशेष सुशी चयनको साथ स्वागत ककटेल पनि समावेश छ। चार कोर्स डिनर, एक सामान्य स्विस डिनर, र 7-कोर्स गाला डिनर, साथ साथै7०-मिनेट स्पा उपचार र १ घण्टा घोडा गाडी यात्राको साथ दैनिक आधा बोर्ड।
अर्को ग्लैमरस फाइभ-स्टार-श्रेष्ठ स्थापना Gstaad को ट्राफिक रहित गाउँको प्रवेशद्वारमा एक idyllic पार्कको बीचमा अवस्थित छ। यो ग्रान्ड होटेल बेल्लेभ्यू 52२ कोठा र धेरै राम्रो आइस बारको साथ छ, यद्यपि एक हप्ता अघि नै बुक गर्नुपर्‍यो भने होटल बाहिर धेरै आरामदायक फोंडु च्यालेटमा सीट खोज्न।
सब भन्दा दर्शनीय मध्ये एक शेरजो परिवारको प्रख्यात सिन्ड्रेला महल दिखिरहेको प्यालेस होटेल हो जुन सबै पोस्टकार्डमा रहेको छ र यस दृश्यमा प्रभुत्व जमाइरहेको छ - यसलाई रूसी, ग्रीकहरू र इटालियनहरूले धेरै माया गर्थे र केवल गेस्टादको स्मारक हो।
जबकि अरब परिवारहरू बरु Gstaad मा आफ्नै चलेट हुन रुचाउँछन् र एक डिनर टेबल बुकि to गर्न प्रयोग गरिन्छ जहाँ उनीहरूले छिटो खानुपर्दछ, किनभने दोस्रो सीटको लागि अर्को राउन्डले उनीहरूलाई मिठाई बिना नै छोड्नेछ। यो खुसी केहि को लागी Gstaad हो। मूल्यहरु आकाशमा छन् यद्यपि Gstaad कम उचाई (१,०2० मिटर) मा छ।
बर्नबाट आइपुग्दै र हिमाली सडकहरू गेस्टादसम्म पुगेर, म हिउँद भरिएको सडकका साथ लिज टेलर र रिचर्ड बर्टनको साथ पुरानो समयको फोटोहरू सम्झना गर्दै - जाडोको हिउँका स्लेजहरू देख्दा म थोरै निराश भएकी छु - अब डामरमा रबरका पाels्ग्राहरूमा दौडिरहेका छन्। हिउँ को अभाव को लागी।
क्रिसमस र नयाँ वर्षको बखत, Gstaad को टूरिस्ट अफिसले गर्वका साथ - to तारे होटेलमा सामान्य 3०० CHF देखि CH०० CHF (US $ 4०-400००) को दरमा होटल कोठाहरू बेच्दै छ, तिनीहरू मध्ये केही धेरै टाढा छ। Gstaad को केन्द्र ताकि एक लाई कार चाहिन्छ। र यी धेरै जसो होटेलहरूलाई फेसलिफ्ट चाहिन्छ र यति उच्च मूल्यको लागि एकदम थोरै प्रस्ताव गर्दछ। तर हिउँमा निदाउन को लाग्छ?
एकदमै असाधारण भनेको Gstaad बाट km किलोमिटर टाढा Lauen मा एक नयाँ सानो बेड र ब्रेकफास्ट, एक सुन्दर सानो Garni को खोज थियो। यसले परिवर्तनहरू गर्यो र पछिल्लो क्रिस्मस खोलेको एक आकर्षक डेनिस महिला, करेन ब्रान्ड, र उनको स्विस पतिले चलाइरहेको छ। बिहानसम्म बिहानको खाजा सेवा गरिन्छ, र ताजा फलफूल र शीतल पेयहरू दिनभरि उपलब्ध हुन्छन्। मूल्य आश्चर्यजनक मध्यम र कोठाहरू ठूला र धेरै आरामदायक छन्।
तर मैले २००० मिटर उचाईमा पहाडको शीर्षमा ईग्लु बुक गरेको छु - सानेर्सलोचग्राट। बर्न्नेस ओबरल्याण्डको इग्लो गाउँ 2000,००० मिटर अग्लो पहाड चुचुराहरूले घेरिएको छ। इग्लो गाउँ निर्माण गर्न the हप्ताको समय सम्म स्वीन्टर मौसमको सुरूमा लिन्छ, र हिउँको अभावका कारण कृत्रिम हिउँ तोपहरू दिनको २ 3,000 घण्टा काम गरिरहेको छ भने यो अनुभव हुन्छ। त्यहाँ bed6शयनकक्षहरू छन् जसको ओछ्यानमा बरफमा कोरिएको छ, र निद्रा झोलामा सुत्नु वास्तविक लक्जरी हुनेछ।
यस इग्लू बुकिंग एकदम साहसी छ किनकि सबै क्रेडिट कार्डलाई स्वागत गरिएको छैन, तर कसैले पोष्टकार्ड पनि भुक्तान गर्न सक्दछ जुन बुकिंग फारममा भन्छ।
अब, कसरी काम गर्दछ? पोष्टकार्ड पठाउने हो? सजिलो, तपाईं स्विजरल्याण्डमा पोष्ट अफिसमा जानुहुन्छ (जुन सप्ताहन्तमा बन्द हुन्छ) र भुक्तानीका लागि लामबद्ध गर्नुहोस्, जुन तपाईंलाई स्विस फ्र्यान्कमा भुक्तान गर्नुपर्दा र स्विजरल्याण्डमा ठेगाना चाहिन्छ।
Gstaad आइपुगेपछि, मैले १० that किलोमिटर स्कीइंगको साथ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो स्की क्षेत्र होर्नबर्ग क्षेत्रमा सानेर्सलोचग्राटसम्म पुग्ने एउटा केबल कार समात्न Sanenmoser (१० किलोमिटर टाढा) पछाडि जानु पर्ने कुरा बुझें। जुन धेरै राम्रो छ तर घाँटीमा दुखाइ छ किनकि अब हामी टिकट किन्न धेरै लामो लाइनमा पर्खनु पर्छ।
इग्लू गाउँको लागि आरक्षण गर्दा वा सिधै इन्टरनेटको माध्यमबाट टिकट किनमेल गर्न सम्भव छैन, मलाई अचम्म लाग्छ। जे भए पनि, सूर्य चम्किरहेको छ, र मेरो साथीले बरफो अनुभवको लागि २ hours घण्टाको लागि इन्न्ट्रेन्ट शपमा स्कीइ out पोशाक भाँडामा दिन्छ। अभियान स्लीपिंग ब्यागहरूले रातको तातो निद्राको ग्यारेन्टी गर्दछ र °24 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रमको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ। तर कसलाई थाहा छ मौसम को स्टोरमा के हो। रातको तापक्रम -१° डिग्री सेल्सियस तल हुन्छ।
रोमान्टिक इग्लोस लेम्बस्किनको साथ राखिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूले डिजाइन गरेका छन्। र यसले पर्चामा भन्छ कि यो "फ्लर्टिंग र विशेष क्षणहरूको लागि उपयुक्त छ।" तर परिवारहरूका लागि त्यहाँ-ओछ्यानका इग्लोहरू पनि छन्। तर कसले यस बरफ चिसो तापमान मा इश्कबाजी गर्न चाहन्छ?
एउटालाई बचाउनको लागि विशेष प्रशिक्षण चाहिन्छ, तर यो राम्रो केटाहरूले प्रस्ताव गर्छन् जसले "ग्लुहवेन" तातो मल्टिन वाइन सेवा गरिरहेका छन्। पहिलो कप नि: शुल्क छ र रात लामो छ, तर बारमा धेरै पेय पदार्थहरू छन्। हामी वरिपरिको हिंड्नु पर्छ र सबै समयमा चल्नु पर्छ, हामीलाई भनियो। रेस्टुरेन्ट महान छ र सबै बरफबाट बनेको छ र केहि उत्कृष्ट नक्काशी छ। भेडाको छालाको बरफ ब्लकमा बसेर, मैले कोरियाबाट आएका केही जोडीसँग, पहिलो पटक पहाडको शीर्षमा र केही अष्ट्रेलियालीहरू र मेरो स्विस साथीसँग टेबल साझा गर्छु।
सुत्ने कोठामा पर्दा पट्टि ढोका छ, र स्विस पनीर fondue पछि, हामी पूर्णिमाको साथ हिउँमा हिउँ जान्छौं। यो धेरै रोमान्टिक छ।
समय बिस्तारै बित्दछ, र फिर्ता आउँदा यो केवल २2300०० घण्टा छ र खुसीको लागि धेरै चिसो छ। बाहिर सौना छ जहाँ हामी हाम्रा सामानहरू र जुत्ताहरू छोडदछौं, जुन हामी अर्को बिहान राम्रो र न्यानो पाउँछौं।
मेरो स्विस साथी एक निद्रा गोली लिन्छ र उनको निद्रा झोला मा गुम्छ - त्यो पहिले अन्टार्कटिकमा भएको छ। अन्य व्यक्तिहरू - मेरो बाँयाका छिमेकीहरू - बेल्जियमका हुन्, र धेरै स्पोर्टीव छन् र चाँडै सुत्न जान्छन्।
मेरो निन्द्रा झोला बन्द हुँदैन - मैले अर्को पनि पाएँ जुन नजिक पनि हुँदैन। मध्यरातमा, म जान चाहन्छु, तर त्यहाँ हिम मोबाईल छैन मलाई डाउनहिल लिन। मलाई डर लाग्छ म रातभर कडा फ्रीज गर्नेछु, तर चिन्ता गर्ने म मात्र एक हुँ - अरु सुतिरहेछन्। चिसोमा यो लामो रात थियो, र पानीको कपाल बाहिर छ। तर कसलाई मनपर्दछ बाहिर चहलपहलमा चम्किलो चमकमा एक भँवरमा बस्न सक्छ, तर कोही पनि त्यस्तो चाहँदैन जस्तो देखिन्छ।
भोलिपल्ट बिहान ब्रेकफास्ट, स्यानर्लोचग्राटको सुन्दर तातो रेस्टुरेन्टमा दिइन्छ - यसले बिस्तारै डिफ्रुस्ट गर्न र तातो कफीको आनन्द लिन केही समय लिन्छ, र हाम्रा केही इग्लो छिमेकीहरूले स्की गरिरहँदा हामी केबल कार तल जान रुचाउँछौं।
रोमान्टिक सुइटमा आइस एडभेन्चरको लागत 539 609 CH सीएफएफ ($ !० US अमेरिकी डलर) छ तर यसमा तातो छैन - for को लागि शयनकक्ष सुरू हुन्छ र एक व्यक्ति १ 6-२167eयुरोमा जान्छ, पनीर फन्डु - कूल!